Mahavoky : Trano hazo 80 lasa lavenona -
AccueilRaharaham-pirenenaMahavoky : Trano hazo 80 lasa lavenona
01/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitrangana hain-trano mahatsiravina indray teny mahavoky, omaly hariva tokony ho tamin’ny 07 ora tany ho any. Trano hazo tsy latsaky ny 80 tafo no indray lasa lavenona vokatr’izany. Ankoatra ireo trano hazo ireo, dia nisy trano biriky manodidina ny 06 teo ihany koa no voakasik’ity hain-trano goavana ity ary tsy nisy azo noraisina intsony ireo entana tao anatin’izany. Araka ny angom-baovao natao teny an-toerana, dia “court- circuit” tao amin’ny trano hazo iray tao amin’io tanàna io no niantombohan’ny afo. Noho ny fitsoakan’ny rivotra, dia vetivety izany, dia nihanaka tany amin’ireo trano hazo teo akaiky ary avy eo nahazo ireo trano avo teo amin’ny manodidina. “Efa ora roa teo izay no nisian’io firehetana io. Mifanetinety avokoa , sy tsy misy tokontany ireo trano hazo ireo ka izay no nitarika ny fiparitahan’ny afo vetivety”, hoy ny fanazavan’i Neny, mponina mipetraka eny an-toerana, sy isan’ireo nanatri-maso ny zava-nisy. Mbola tsy fantatra ny isan’ireo olona naratra na namoy ny ainy vokatr’ity loza mahatsiravina ity, fa raha ny filazan’ireo olona isan’ny niharam-boina, tamin’ny fotoana nandalovanay teny an-toerana, dia ramatoa be iray, sy lehilahy iray ary zazakely iray no tavela tao anatin’ireo trano may sy lasa lavenona ireo.
Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina sy ny mpitandro filaminana nijery ifotony ny zava-nisy , ary nanampy ireo mponina tamin’ny famonoana ny afo, izay tena nanano sarotra ny namehezana azy. Anaty tanàna rahateo no nitrangan’ny loza ka tsy tafiditra tao an-toerana ny fiaran’ireo mpamonjy voina fa voatery najanona teny amin’ny arabe miditra an-i Mascar iny. Samy nanao izay ho afany ary nifanome tanana moa ny rehetra saingy tsy nisy azo noraisina intsony ireo fitaovana rehetra tao amin’ireo trano voakasika ireo. Efa notsihifina hatramin’ireo rano maloto tany anaty lakan-drano saingy mbola tsy ampy namonoana ny afo izany. Tombanana any amin’ny olona anjatony any no traboina naterak’izao hain-trano teny Mahavoky izao. Mbola nitohy hatramin’ny omaly alina kosa ny fikarohana ireo olona voalaza fa tsy hita popoka ireo. Nisesisesy ny hain-trano tato ho ato ary ireo trano hazo no tena lasibatra tamin’izany, raha tsy hilaza afa-tsy ilay hain-trano nitranga teny Andohatapenaka ny alahady lasa teo. Ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny mpamonjy voina dia nanamafy fa tsy fitandremana matetika no mahatonga ny firehetana eto an-drenivohitra.